Wararka - Dib u eeg sawirada gawaarida caadiga ah (gawaarida caadiga ah) qadarinta moodada gaariga
Gawaarida hore, sidoo kale loo yaqaan gawaarida caadiga ah, guud ahaan waxaa loola jeedaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka ama gawaaridii hore. Gaarigii hore waa wax soo saarka nostalgia. Waa gaari ay dadku isticmaali jireen waagii hore welina ay shaqeyn karaan. Magaca Ingiriisiga waa baabuur guris. Shabakada qaab-dhismeedka 0312 waxay leedahay maqaallo badan oo ku saabsan sawirrada gawaari duug ah. Si kastaba ha noqotee, la'aanta ereyada khuseeya markii la daabacayay, looma soo bandhigi karo mid mid xilligan. Waanu kala saari doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Sunstar waxay soo saartay nooc Ford ah oo loo yaqaan 'Coupe'
Fikradda gaariga caadiga ahi wuxuu bilaabmay 1973 wuxuuna ka soo muuqday joornaal Ingiriis caan ah iyo baabuur caadi ah. In kasta oo tarjumaaddeeda suugaan ahi ay tahay “baabuur duug ah oo qadiim ah”, laakiin midabkeeda anthropomorphic ee adag awgood, erayga “baabuur caadi ah” ayaa markiiba helay aqoonsiga dadka jecel baabuurta caadiga ah oo si dhakhso leh ugu faafay, isagoo noqday cinwaan mideysan oo ah baabuur duug ah oo loogu talagalay dadka jecel adduunka oo idil. .
Qalabka Acme Ford Model 1932 Ford Roadster
Si kastaba ha noqotee, illaa iyo hadda, ma jiro qeexitaan caadi ah oo la aqbali karo oo ku saabsan baabuurta caadiga ah, taariikhyahannada baabuurta iyo kuwa xiisaynaya baabuurta ayaa wali murmaya. Naadiga gawaarida caadiga ah ee Mareykanka wuxuu liis garayaa nooca ama moodeelka ay doorbidayaan (sida: soosaarka 1925-1948) oo ah mid dhameystiran, kaasoo lagu qeexay "gaari aan caadi aheyn, oo leh qaab aad u fiican, qaabeyn heer sare ah iyo wax soo saar". Waxay doorbideysaa noocyada Mareykanka, laakiin badeecooyinka yurubiyanku waxay leeyihiin qoomamo isbeddellada.
Xiddiga Sun ayaa soo saaray nooc Ford ah nooca loo yaqaan Tudor balsam
Baabuur kasta oo duug ah uma qalmo inuu noqdo gaari caadi ah. Dayactir wanaagsan waa shardi muhiim ah. Suuqa dhexdiisa, ma jiraan gawaari badan oo wata naqshad casri ah. Sida gawaarida badankood ay yihiin gawaari afar albaab leh oo qiimahoodu hooseeyo, waa uun gaadiid.
Heerka kala soocida baabuurta caadiga ah
Naadiga baabuurta ee Ameerika
Antiques: dhammaan gawaarida wixii ka horreeyay 1930
Soo saar: dhammaan gawaarida wixii ka horreeyay 1930
Classic: 1930-1948 baabuur aad u fiican
Haybad: 1946-1972 baabuur tayo sare leh.
Soosaar xaddidan: Gawaarida "danta gaarka ah" oo lagu soo saaray tiro yar Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib
Naadiga gawaarida ee Ingiriiska
Guud ahaan marka laga hadlayo, kala qaybsanaan dhammaystiran waa sida soo socota:
Kahor 1918, gawaarida oo dhan waxaa si wada jir ah loogu tilmaamay inay yihiin kuwo qadiim ah, kuwaas oo loo qaybiyay Edward VII iyo halyeey;
Gawaarida laga bilaabo 1918 ilaa 1931 waxay ahayd sumaddii hore ee caanka ahayd;
Laga soo bilaabo 1932 ilaa 1945, baabuurku wuxuu ahaa summad caan ah;
Dagaalkii Labaad ee Adduunka kadib, gawaarida matala waxaa loo ixtiraamay sida casriga casriga ah.
Naadiyada qaar ee Shiinaha
Gaari duug ah: kahor 1925;
Gawaarida caadiga ah: 1926-1941;
Fasaxyada dagaalkii hore: wixii ka dambeeyay 1945.
Qeybinta Mareykanka guud ahaan waxaa loo qaataa inay tahay heerka adduunka. Sababtoo ah Mareykanku waa Boqortooyada ugu weyn gawaarida, oo leh inta badan gawaarida caadiga ah (suuqa ugu weyn ee gawaarida raaxada ee Yurub kahor iyo kadib dagaalka waa Mareykanka), iyo dagaalka kadib, Mareykanka oo leh dhaqaale iyo qalab adag kheyraadku waxay ku dhowaadeen inay tirtiraan gawaarida casriga ah ee Yurub.